PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-05-28 - Izimpendulo dololo kuhlulwa i-ANC
Izimpendulo dololo kuhlulwa i-ANC
I-ANC KwaZulu-Natal iyayivuma induku emuva kokwehlulwa kabuhlungu okhethweni lokuchibiyela obelubhekwe ngabomvu eNquthu ngoLwesithathu. Kulolu khetho i-IFP izigwazele ibhece ithatha ama-ward angu-14 kwangu-17 abebangwa, i-ANC ithole ama-ward amathathu. Okhulumela i-ANC esifundazweni uMnuz Mdumiseni Ntuli, uthe nakuba ibethusile indlela abehlulwe ngayo kodwa asikho isikhalo abazosifaka kwikhomishini yokhetho.
“Kuyamangaza ukuthi ngokhetho olwedlule sanqoba ama-ward amaningi eNquthu, bese kuzothi esikhathini esincane kangaka izinto ziguquke. Uma senza izibalo kahle ayiphumi impendulo ecacile. Sisazibuza ukuthi yini le eshintshe kangaka i-IFP yagcina isehlule ngesibalo esikhulu kangaka,” kusho uNtuli.
Uthe beyi-ANC benze konke okusemandleni bekhankasa ubusuku nemini eNquthu.
UNobhala we-IFP KwaZulu Natal uMnuz Velenkosini Hlabisa, uthe awukho umlingo abenze ngawo, kube wukusebenza kanzima belungiselela ukhetho nokukhuluma iqiniso kubantu. Usole i-ANC ngokusebenzisa izinsiza zikahulumeni ukukhankasela ukhetho. Uthe ibincenga abantu ngokudla. “Abantu bakwazile ukwehlukanisa phakathi kwabantu abazobanunusela ngezijumbane zokudla ngomzuzu wokugcina nathi ebesizithobile sikhuluma nabo iqiniso silalele izidingo zabo. Bathathe isinqumo esifanele bakhetha thina,” kusho uHlabisa.
Uthe kube yinto enhle ukunqoba ngamalengiso ngoba lokho kubanike ithuba lokubusa umkhandlu omkhulu uMzinyathi nokuzokwenza kube lula ukuhambisela abantu izidingo zabo.
“Simi ngomumo manje silinde kuphele lesi sikhathi esibekiwe kukhethwe abantu ezikhundleni bese kushunqa uthuli sihambise intuthuko kubantu. Amanzi yiwona aseqhulwini ezintweni ezidingwa ngabantu baseNquthu, sesimi ngomumo impela,’’ kusho uHlabisa.
Lolu khetho lulandela ukuhlakazwa komkhandlu emuva kokuthi wehluleke izikhawu eziyisithupha ukuhlangana.
BHEKA EKHASINI 14